Imigomo Yokusebenzisa | component-zu.com
1. Impahla Engokwengqondo.
Isevisi, iSayithi, kanye nalo lonke ulwazi kanye / noma okuqukethwe okubonayo, okuzwayo noma okunye okutholile kuSayithi ('Okuqukethwe') kuvikelwe yi-China nelungelo lobunikazi bamazwe omhlaba, uphawu lwentengiso neminye imithetho, futhi kungokwakwaComponent-en. com noma umzali wayo, abalingani, abaxhumana nabo, abanikeli noma abantu besithathu.Component-en.com ikunikeza ilayisense yomuntu siqu, engadluliseki, engakhethi ukusebenzisa iSayithi, i-Service kanye nokuqukethwe ukuphrinta, ukulanda nokugcina izingxenye ze- Okuqukethwe okukhethayo, inqobo nje uma: (1) usebenzisa kuphela lawa makhophi wokuqukethwe ngezinjongo zakho zebhizinisi langaphakathi noma ukusebenzisa kwakho komuntu siqu, okungekhona okokuthengisa; (2) ungakopishi noma uthumele okuqukethwe kunoma iyiphi ikhompyutha yenethiwekhi noma usakaze, usabalalise, noma usakaze okuqukethwe kunoma iyiphi imidiya; (3) ungaguquli noma uguqule okuqukethwe nganoma iyiphi indlela, noma ususe noma ushintshe noma yisiphi isaziso se-copyright noma uphawu lwentengiso. Alikho ilungelo, isihloko noma intshisekelo kunoma yikuphi okuqukethwe okulandiwe noma izinto ezidluliselwa kuwe ngenxa yale layisensi. IComponent-en.com igcina isihloko esiphelele namalungelo agcwele epropathi wengqondo kunoma yikuphi okuqukethwe okulanda kusuka eSizeni, ngokuya ngale layisensi elinganiselwe ukuze ukwazi ukusebenzisa okuqukethwe ngokwakho njengoba kubekiwe lapha. Awungeke usebenzise noma yimaphi amamaki noma ama-logo avela kuyo yonke iSayithi ngaphandle kwemvume ebhaliwe evela kumnikazi wophawu lwentengiso, ngaphandle kwalapho kuvunyelwe umthetho osebenzayo. Awukwazi ukufaka isibuko, ukukhuhla, noma ukubiyela ikhasi lasekhaya noma amanye amakhasi alesi Sayithi kunoma iyiphi enye iwebhusayithi noma ikhasi lewebhu. Ungahle ungaxhumanisi 'izixhumanisi ezijulile' neSayithi, okungukuthi, dala izixhumanisi zaleli sayithi elidlula ikhasi lasekhaya noma ezinye izingxenye zeSayithi ngaphandle kwemvume ebhaliwe.
I-Component-en.com ayisho okucacile, okushiwo iziqinisekiso noma izethulo maqondana nanoma imuphi umkhiqizo, noma maqondana nesayithi, insizakalo noma okuqukethwe. I-Component-en.com izilahla ngokusobala zonke iziqinisekiso zanoma yiluphi uhlobo, ukuveza, ukusikisela, okusemthethweni noma okunye, kufaka phakathi, kepha kungagciniwe, kwiziqinisekiso ezisikiselwe zokuthengiseka, ukufaneleka ngenhloso ethile, isihloko futhi akukho ukwephulwa maqondana nemikhiqizo, i isayithi, insizakalo, nokuqukethwe.Component-en.com akuqinisekisi ukuthi imisebenzi eyenziwa yisayithi noma isevisi izophazanyiswa, ifike ngesikhathi, iphephe noma ibe namaphutha, noma ukuthi ukukhubazeka esizeni noma kwensizakalo kuzoba ukulungiswa.Component-en.com akuqinisekisi ukunemba noma ukuphelela kokuqukethwe, noma ukuthi noma yimaphi amaphutha kokuqukethwe azolungiswa. Isayithi, insizakalo nokuqukethwe kunikezwa ngesisekelo 'Njengoba sinjalo' futhi 'njengoba kutholakala'.
Ku-Component-en.com, amakheli we-IP wezivakashi ayabuyekezwa futhi ahlaziywe ngezikhathi ezithile ngenhloso yokuqapha, nokwenza ngcono iwebhusayithi yethu kuphela, futhi ngeke kwabelwane ngayo ngaphandle kwe-Component-en.com.
Ngesikhathi sokuvakashela iwebhusayithi, singakucela imininingwane yokuxhumana (ikheli le-imeyili, inombolo yocingo, inombolo yefeksi namakheli okuthumela / wokukhokha) .Lolu lwazi luqoqwa ngokuzithandela - futhi kuphela ngemvume yakho.
3. Umkhawulo Wezikweletu.
Akunakwenzeka ukuthi iComponent-en.com ibe nesibopho kumthengi noma kunoma yimuphi umuntu wesithathu nganoma imuphi umonakalo ongaqondile, owenzekile, okhethekile, olandelayo, wokujeziswa noma oyisibonelo (kufaka phakathi ngaphandle komkhawulo wenzuzo elahlekile, ukonga okulahlekile, noma ukulahleka kwamathuba ebhizinisi) okuvelayo ukuphuma noma okuphathelene (I) Noma yimuphi umkhiqizo noma insizakalo inikezela noma izonikezwa yiComponent-en.com, noma ukusetshenziswa kokungakwazi ukusebenzisa okufanayo; (II) Ukusetshenziswa noma ukungakwazi ukusebenzisa isiza, insizakalo, noma okuqukethwe, (III) Noma yikuphi ukuthengiselana okwenziwe noma okwenziwe indawo leyo; (IV) Noma isiphi isimangalo esibangelwe amaphutha, ukushiywa, noma okunye ukungalungi endaweni, isevisi kanye / noma okuqukethwe; (V) Ukufinyelela okungagunyaziwe noma ukudluliswa kokudluliswayo noma idatha yakho, (VI) Izitatimende noma ukuziphatha kwanoma yimuphi umuntu wesithathu kusayithi noma kusevisi; (VII) Noma yiluphi olunye udaba oluphathelene nemikhiqizo, isayithi, insizakalo noma okuqukethwe, noma ngabe yi-Component-en. com uye welulekwe ngamathuba omonakalo onjalo.
Isibopho se-Component-en.com kuphela nesibopho sokukhubazeka komkhiqizo, kuzoba inketho ye-Component-en.com, ukufaka esikhundleni somkhiqizo onephutha noma ukubuyisela kumakhasimende inani elikhokhwe yikhasimende ngakho-ke akunakwenzeka ukuthi isikweletu seComponent-en.com sidlule Intengo yokuthenga yomthengi. Ikhambi elandulelayo lizoba ngaphansi kwesaziso esibhaliwe somthengi sokukhubazeka nokubuyiselwa komkhiqizo onesici kungakapheli izinsuku ezingamashumi ayisithupha (60) uthengiwe. Ikhambi elingenhla alisebenzi emikhiqizweni esetshenziswe kabi (kubandakanya ngaphandle kokulinganiselwa ukukhishwa okungaguquki), ukunganakwa, ingozi noma ukuguqulwa, noma kumikhiqizo edayisiwe noma eguquliwe ngesikhathi somhlangano, noma kungenjalo ayikwazi ukuhlolwa. Uma unganelisekile ngesayithi, insizakalo, okuqukethwe, noma imigomo yokusetshenziswa, ikhambi lakho elilodwa futhi elikhethekile ukuyeka ukusebenzisa isayithi. Uyavuma, ngokusebenzisa kwakho isiza, ukuthi ukusebenzisa kwakho isayithi kuyingozi yakho kuphela.